လျှပ်စစ်ကားဆိုတာဘာလဲ၊ လျှပ်စစ်ကားအကြောင်း သိကောင်းစရာများ | CarsDB
လျှပ်စစ်ကားဆိုတာဘာလဲ၊ လျှပ်စစ်ကားအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
လျှပ်စစ်ကားများကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ တင်သွင်းခွင့်ပြုပြီးတဲ့အခါ လျှပ်စစ်ကားဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိသလဲ စသဖြင့် သိရှိဖို့လိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်.။ ဒါကြောင့် လျှပ်စစ်ကားများအကြောင်းကို မိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.။
လျှပ်စစ်ကားဆိုတာ သာမန်ဓါတ်ဆီ (သို့) ဒီဇယ်အင်ဂျင် မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်မော်တာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ကားအမျိုးအစားကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်.။ စွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်နဲ့ အားပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ ဘက်ထရီတွေထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်.။
လျှပ်စစ်ကားနဲ့ သာမန်ကား ဘာကွာပါသလဲ?
လျှပ်စစ်ကားနဲ့ သာမန်ကားတွေရဲ့ အဓိကကွာခြားချက်ကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်.။ ကွာခြားချက်အချို့ကို အောက်မှာပြောပြထားပါတယ်.။
လျှပ်စစ်ကားတွေဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနဲ့ သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု မရှိပါဘူး.။ သာမန်ကားတွေကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ Greenhouse Gases တွေထုတ်လွှတ်ပါတယ်.။
လျှပ်စစ်ကားတွေဟာ အားအပြည့်သွင်းထားရင် မိုင် (၁၀၀) ပတ်လည်လောက်ပဲ သွားနိုင်ပါတယ်.။ သာမန်ကားတွေကတော့ တိုင်ကီအပြည့်ဖြည့်ထားရင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် မိုင် (၃၀၀) အထက်သွားနိုင်ပါတယ်.။
လျှပ်စစ်ကားတွေဟာ အားပြန်လည်ဖြည့်သွင်းဖို့ နာရီနဲ့ချီပြီး ကြာမြင့်ပါတယ်.။ သာမန်ကားတွေကတော့ လောင်စာဖြည့်သွင်းဖို့ မိနစ်အနည်းငယ်သာ ကြာပါတယ်.။
လျှပ်စစ်ကားတွေဟာ သာမန်ကားတွေထက် ကုန်ကျစားရိတ်သက်သာပါတယ်.။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် (၆) ဆခန့် ပိုမိုသက်သာတာဖြစ်ပါတယ်.။ လျှပ်စစ်ကား (၆) မိုင်မောင်းနှင်တဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်နဲ့ သာမန်ကား (၁) မိုင်မောင်းနှင်တဲ့ ကုန်ကျစားရိတ် အတူတူနီးပါးရှိပါတယ်.။
Hybrid ကားတွေကတော့ လျှပ်စစ်ကားတစ်ပိုင်း လောင်စာဆီကားတစ်ပိုင်းလို့ ပြောရမယ့်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်.။ လောင်စာဆီပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် လိုအပ်ပြီး မောင်းနှင်တဲ့အခါမှာတော့ ဘက်ထရီနဲ့ လျှပ်စစ်မော်တာအကူအညီနဲ့ ပိုမိုမောင်းနှင်နိုင်ကြပါတယ်.။
CarsDB မှ Nissan Leaf ကားများကိုကြည့်ရန်
လျှပ်စစ်ကားများကြောင့် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးမျိုး ရနိုင်မလဲ?
လျှပ်စစ်ကားများအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းကို 30% အထိ လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒါကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရာရောက်ပြီး ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးမှု လျှော့ချရေးကိုလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်မှု ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများအနေနဲ့ အမေရိကန်မှ Tesla Motors, နော်ဝေနိုင်ငံမှ Think Gllobal, အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ Reva, ဂျပန်နိုင်ငံမှ Mitsubishi နဲ့ Nissan တို့မှ ဦးဆောင်နေကြပါတယ်.။
လြှပျစဈကားမြားကို အခှနျကငျးလှတျခှငျ့နဲ့ တငျသှငျးခှငျ့ပွုပွီးတဲ့အခါ လြှပျစဈကားဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယျလိုအလုပျလုပျသလဲ၊ ဘာအကြိုးကြေးဇူးတှရှေိသလဲ စသဖွငျ့ သိရှိဖို့လိုလာပွီဖွဈပါတယျ.။ ဒါကွောငျ့ လြှပျစဈကားမြားအကွောငျးကို မိတျဆကျတငျပွပေးလိုကျပါတယျ.။
လြှပျစဈကားဆိုတာ သာမနျဓါတျဆီ (သို့) ဒီဇယျအငျဂငျြ မဟုတျဘဲ လြှပျစဈမျောတာတပျဆငျထားတဲ့ ကားအမြိုးအစားကို ပွောတာဖွဈပါတယျ.။ စှမျးအငျကို လြှပျစဈနဲ့ အားပွနျသှငျးနိုငျတဲ့ ဘကျထရီတှထေဲမှာ သိမျးဆညျးထားတာဖွဈပါတယျ.။
လြှပျစဈကားနဲ့ သာမနျကား ဘာကှာပါသလဲ?
လြှပျစဈကားနဲ့ သာမနျကားတှရေဲ့ အဓိကကှာခွားခကျြကတော့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြအပျေါ သကျရောကျမှုလို့ ပွောနိုငျပါတယျ.။ ကှာခွားခကျြအခြို့ကို အောကျမှာပွောပွထားပါတယျ.။
လြှပျစဈကားတှဟော လြှပျစဈဓာတျအားနဲ့ သှားတာဖွဈတဲ့အတှကျ အငှထေု့တျလှတျမှု မရှိပါဘူး.။ သာမနျကားတှကေတော့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို ထိခိုကျစတေဲ့ Greenhouse Gases တှထေုတျလှတျပါတယျ.။
လြှပျစဈကားတှဟော အားအပွညျ့သှငျးထားရငျ မိုငျ (၁ဝဝ) ပတျလညျလောကျပဲ သှားနိုငျပါတယျ.။ သာမနျကားတှကေတော့ တိုငျကီအပွညျ့ဖွညျ့ထားရငျ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ မိုငျ (၃ဝဝ) အထကျသှားနိုငျပါတယျ.။
လြှပျစဈကားတှဟော အားပွနျလညျဖွညျ့သှငျးဖို့ နာရီနဲ့ခြီပွီး ကွာမွငျ့ပါတယျ.။ သာမနျကားတှကေတော့ လောငျစာဖွညျ့သှငျးဖို့ မိနဈအနညျးငယျသာ ကွာပါတယျ.။
လြှပျစဈကားတှဟော သာမနျကားတှထေကျ ကုနျကစြားရိတျသကျသာပါတယျ.။ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ (၆) ဆခနျ့ ပိုမိုသကျသာတာဖွဈပါတယျ.။ လြှပျစဈကား (၆) မိုငျမောငျးနှငျတဲ့ ကုနျကစြားရိတျနဲ့ သာမနျကား (၁) မိုငျမောငျးနှငျတဲ့ ကုနျကစြားရိတျ အတူတူနီးပါးရှိပါတယျ.။
Hybrid ကားတှကေတော့ လြှပျစဈကားတဈပိုငျး လောငျစာဆီကားတဈပိုငျးလို့ ပွောရမယျ့ကားတှဖွေဈပါတယျ.။ လောငျစာဆီပွနျလညျဖွညျ့တငျးရနျ လိုအပျပွီး မောငျးနှငျတဲ့အခါမှာတော့ ဘကျထရီနဲ့ လြှပျစဈမျောတာအကူအညီနဲ့ ပိုမိုမောငျးနှငျနိုငျကွပါတယျ.။
CarsDB မှ Nissan Leaf ကားမြားကိုကွညျ့ရနျ
လြှပျစဈကားမြားကွောငျ့ ဘယျလိုအကြိုးကြေးဇူးမြိုး ရနိုငျမလဲ?
လြှပျစဈကားမြားအသုံးပွုခွငျးကွောငျ့ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုကျ ထုတျလှတျမှုနှုနျးကို 30% အထိ လြှော့ခနြိုငျမှာဖွဈပါတယျ.။ ဒါကွောငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို ထိနျးသိမျးကာကှယျရာရောကျပွီး ကမ်ဘာကွီး ပူနှေးမှု လြှော့ခရြေးကိုလညျး အတိုငျးအတာတဈခုအထိ ကူညီနိုငျမှာဖွဈပါတယျ.။
ကမ်ဘာပျေါမှာ အကွီးဆုံး လြှပျစဈကားထုတျလုပျမှု ဦးဆောငျကုမ်ပဏီမြားအနနေဲ့ အမရေိကနျမှ Tesla Motors, နျောဝနေိုငျငံမှ Think Gllobal, အိန်ဒိယနိုငျငံမှ Reva, ဂပြနျနိုငျငံမှ Mitsubishi နဲ့ Nissan တို့မှ ဦးဆောငျနကွေပါတယျ.။
Posted at: 06-08-2015 14:22 PM